Dhalinyaradda soomaalida oo loo abuurayo barnaamij loogaga hortagayo kooxaha xagjirka ah | Somaliska
Mid ka mid ah urruradda soomaalida ee ka howl gala gobolkan Göteborg ee dalka Iswiidhan ayaa ku hoowlan mashruuc diirada lugu saarayo siddii looga hortagi lahaa kooxaha xagjirka ah ee dhalinyaradda ay soomaalidu ka mid tahay madax roga.
Urrurkan Somali Dialogue Center, oo isagu mashruucan gacanta ku haya ayaa muddo sadex sanno qabtanayey barnaamijyo lugu baraarujinayey dhalinyaradda si ay ugu digtoonaadaan haliska ay leeyihiin kooxaha xagjirka ah.
Madaxa urrurkan Cali Yaasin Gurbe, oo u waramayey idaacadda Iswiidhan qeybteeda P4, ayaa sheegay in maanta ay sahlan tahay in dhalinyaradda iyagoo loo soo marayo aaladaha internet-ka la maran habaabiyo. Urrurkooduna ku howlan yahay siddii dhalinyarro soddomeeyo gaareeysa loo siin lahaa tababaro la xirriira ka hortaga kooxaha xagjirka ah. Dhalinyaradan ayaa sameyn doono muuqaalo dukomenteri ah iyo barnaamijyo aqooneed iyagoo adeegsanaya baraha baraha bulshada una sii gudbin doona dhalinyaradda kale ee degan magaalooyinka waaweeyn ee ay soomalida ku badan tahay.
“Haddii aan iskaashano waxaan sameyn karnaa isbadal” ayuu yiri Cali Yaasin oo waramayey radio Iswiidhan p4. Dalkaan Iswiidhan ayaa la runsan yahay ineey ka tageen dhalinyarro ay soomaalida ka mid tahay, kuwaas oo dalka dibadiisa u dhoofay si ay ugu biiraan kooxaha xagjirka ah. Dhibaatooyinka loo aaaneeynayo sababaha ay dhalinyarro badan oo soomaali ug biiraan kooxahaas ayaa Somali Dialogue Center, ku tilmaameen ineey salka ku heeyso ka baxsanaanta ay bulshadda kaga baxsan yihiin iyo shaqo la’aan heeysa.
Ma ahan barnamiijkii ugu horeeyey ee la xirriira ka hortaga xagjirnimadda ee ay urruradda soomaalida Iswiidhan ka qeyb qaataan, dowladuna ku taageerto. Urrurka isbaheeysiga soomaalida Iswiidhan ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaa barnaamij noocan oo lugu wacyigelinayo dhalinyaradda soomaalida oo sanadihi dambe qaarkood gacanta u galay kooxaha islaamiyiinta ah ee mayalka adag.